LG G5, tani waa qaybteeda xoogga leh ee lagu hagaajinayo maqalka | Androidsis
Alfonso ee Miraha | | LG, MWC
LG ayaa naga yaabisay intii lagu guda jiray soo bandhigida LG G5. In kasta oo ay run tahay in astaamaheeda farsamo badankood ay ahaayeen sir qarsoon, soo saaraha Kuuriya ayaa si layaab leh noogu kaydiyay: the modules lagu dhejin karo LG G5.
Waana in LG ay naga yaabisay inay soo bandhigto taleefan casri ah oo casri ah, iyadoo aan ahayn taleefanka nooca loo yaqaan 'Project Ara', wuxuu na siinayaa fursado aad u xiiso badan. Maantana waxaan kuugu soo bandhigeynaa fiidiyowga awoodda leh module si loo hagaajiyo maqalka LG G5.
LG Hi-Fi Plus oo leh B&O Play, waa sida qaabka maqalka LG G5 u shaqeeyo
Qofka masuulka ka ah inuu na tuso sida qaybtan maqalka ah ee LG G5 u shaqeeyo Jairo Piñeiro, Maareeyaha Deegaanka LG, kaas oo, sidaad ku aragtay fiidiyowga, na tusaya dhammaan sirta LG Hi-Fi Plus oo leh B&O Play.
Waana tan ka dambeysa magacan murugsan waxaa jira module aad u xiiso badan oo loogu talagalay LG G5. LG Hi-Fi Plus oo leh moduleka B&O Play, kaas oo ku fidsan gunta hoose ee taleefanka, cabirkiisana aad u yara badanaya kuna badalaya maaddada iyo birta ku dhammeysa madow madow qeybta, waxay bixisaa xitaa tayada codka sare.
Muuji in qaybtan wali isticmaal dekedda USB Type-C ee caadiga ah, marka lagu daro soosaarka afhayeenka iyo qalab dhegeysi cusub oo 3.5 ah oo lagu daro qalabka dijitaalka ah.
Cutubkan 32 xoogaa DAC, oo ay soo saartay shirkadda Danish-ka ah ee Bang & Olufsen, waxay taageertaa qulqulka dhijitaalka ah ee tooska ah ee loogu talagalay faylasha maqalka ee xallinta sare waxayna hagaajineysaa tayada cod kasta oo 24-bit ah illaa 32-bit ah. Sida cad si aad u sheegto faraqa aad u leedahay inaad isticmaasho dhagaha dhagaha leh oo tayo sare leh, laakiin tijaabooyinkayagii ugu horreeyay ee LG booth waxay ahaayeen kuwo ka qanacsan.
Faahfaahin aad u xiiso badan ayaa la socota xaqiiqda ah in LG aysan rabin inay ka dhigto qaybteeda maqalka mid u gaar ah LG G5. Haddii aan rabno, waxaan ku xiri karnaa LG Hi-Fi Plus barnaamijka 'B&O Play module' wixii Mac OS X ah, iPhone, iPad iyo qalab Android ah.
Waxaan horeyba u jeclaanay fikradda 'modules', hab ka duwan sidii loo abuuri lahaa oo loogaga sooci lahaa naftaada tartamayaashaada. Iyo xaqiiqda ah in LG uusan ku xaddidnayn barnaamijkeeda maqalka LG G5, oo u oggolaanaya inuu ku xirnaado taleefan kasta wuxuu ka dhigayaa qalabkan ikhtiyaar aad u xiiso badan.
Adigana adiga, maxaad u maleyneysaa qalabka maqalka ee LG G5?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » LG » LG G5, tani waa qaybteeda xoogga leh ee lagu hagaajinayo maqalka
Venetian aan la aqoon dijo
Moodalka, taleefanka kuma haboona daboolkiisa caadiga ah markaa intaad haysato lama ilaalinayo 🙁
Ku jawaab Venetian aan la aqoon
Waxaan ku tusineynaa sida loo beddelo modules LG G5
Tani waa sida ay u shaqeeyaan kamaradaha Mydlink 180